NAB Show News by Broadcast Beat, Fampielezan-kevitra ofisialin'ny NAB Show - NAB Show LIVE - Pejy 960 - 2019 NAB Show News: Fampielezam-peo fampitaovana, TV & Radio Technology ary Post Production News. Asehoy ny 2019.
Solosaina lozisialy sy rindrambaiko manararaotra ny motera AI, ny format-tsary LTO8 rakitra data mlogic a ...
Q: Inona ny anjara asanao amin'izao ary inona no tafiditra amin'izany? A: injeniera audio mpandidy ary mixer, m ...
Fanjakana vaovaon'ny onjam-peo: Digital Comm Link's Digicaster SoloCam
Ny Digicaster SoloCam (loharano: Digital Comm Link, Inc.) hatramin'ny nampidirany tao 1995, Florida-ba ...
Filoha lefitra, Production
Comments Off amin'ny filoha lefitra, Production
Ny FX Networks dia mitady filoha lefitra hanampy ny SVP of Production amin'ny fitantanana ny famokarana ireo mpanamory ny fahitalavitra misy soratra, andian-dahatsoratra sy andian-doka voafetra novokarin'ny FX Network, ary nifanerasera tamin'ireo mpanatanteraka nifehy ny famokarana pilotan'ny antoko fahatelo sy andian-dàlana nomen'ny alalana. FX na miaraka miasa miaraka amin'ny FX Productions. Andraikitra: Production ManagementInterfaces miaraka amin'ireo ekipa anatiny no mifehy ny famokarana ary koa mpamokatra mpanatanteraka sy mpanatanteraka famokarana ivelany sy mpanatanteraka famatsiana ho an'ny programa fahazoan-dàlana ao amin'ny FX.Analy ny teti-bolan'ny famokarana sy ny tatitra momba ny vidiny ao anatin'ny rafitry ny vina mpamorona FX mpamorona manantena hahatratra; mpanara-maso ...
Television asa, Jr. injeniera
Comments Off ao amin'ny Television Operations, Jr. Engineer
Playboy- toerana izay afaka manavao ny innovateurs. Manana talenta ambony isika ary manolotra tontolo iray izay ahafahan'izy ireo mamorona sy mpisava lalana hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa. Playboy no marika fanta-daza indrindra amin'ny fialambolin'ny olon-dehibe eto amin'izao tontolo izao. Amin'ny alàlan'ny fifanarahana momba ny lisansa, Playboy dia miseho amin'ny vokatra avy amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny famoaham-baovao samihafa any amin'ny firenena 150. Tokony hanampy ny mpikambana ao amin'ny ekipantsika isika hanangana asa mahafinaritra sy mahomby. Ny fivoaran'ny Playboy amin'ny alàlan'ny fanontam-pirinty mankany amin'ny fahitalavitra mankany amin'ny aterineto ary amin'izao fotoana izao amin'ny finday dia nentin'ny fanahintsika ho mpitarika eo amin'ny indostriantsika ary koa ny herim-po hanohanana ny lohany.
Mpanampy mpanatanteraka, Post Production
Comments Off amin'ny Assistant Executive, Post Production
Ny adidy administratify dia ahitana telefona mavesatra, antso an-tariby, fanoherana, famaizana ary fametrahana. Andraikitra dia ahitana ny fivoriana fandefasana, fandaminana fitsangatsanganana, fanamboarana tatitra momba ny fandaniana, fametrahana duplication video, fizarana ny famoahana sy ny fihenam-bidy, ary ny fitazonana ny tranomboky video ho an'ny fampisehoana rehetra. Ny tsirairay ihany koa dia tompon'andraikitra amin'ireto manaraka ireto: Manatrika fivoriana famokarana herinandro isan-kerinandro. Fanavaozana ny ekipan'ny ekipa sy ny talenta amin'ny fandaharan'ny Filoha. Manaraka ny foto-pisainan'ny episodika ho an'ny andian-tantara. Fanaraha-maso ny faktiora mifanaraka amin'ny dingana fandoavam-bola ataon'ny mpihira, amin'ny sehatry ny lisansa mozika. Manampy amin'ny singa fanafody sy asa amin'ny taratasy. Ny mpilatsaka ho fidiana ho mpilatsaka ho fidiana dia ho mpitarika ny tenany manokana izay mitaky fandraisana andraikitra sy ...
Comments Off ao amin'ny Editorial Production Assistant
Ny Assistant Editorial amin'ny Access for Access Hollywood dia tompon'andraikitra amin'ny fanohanana ireo mpamokatra ny fampisehoana araka izay ilaina, ary ny fametrahana ny fitaovana rehetra asaina ataon'ny Mpitantana. Andraikitra: Asehoy amin'ny mpamokatra ny toerana sy ny fakana sary sy feo. Manorata fitaovana hafa arak'izay ilain'ireo mpamokatra an'ilay fampisehoana. Ny fandikana Verbatim ny biraon'ny saha ho an'ny Access Hollywood sy ny fehezanteny entina. Ny tambajotra samihafa dia maneho sy andian-teny. Fepetra hafa nomen'ny Manager.QUALIFICATIONS / FITSIPIKA Fepetra: mari-pahaizana licence avy amin'ny oniversite iray na oniversite. Ny traikefa 1 XNUMX minitra miara miasa amin'ny Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, sns.). Fepetra takiana amin'ny fahazoan-dàlana: Ny kandidà liana dia tsy maintsy manolotra fialamboly ho an'ny ...
Comments Off amin'ny Assistant Production / Runner
Ny NBCUniversal dia iray amin'ireo orinasam-pampahalalam-baovao sy fialam-boly manerantany amin'ny fampiroboroboana, famokarana ary fivarotana fialamboly, vaovao ary fampahalalana ho an'ny mpihaino manerantany. Ny NBCUniversal dia manana portfolio-n'ireo tambajotram-baovao sy fialam-boly fialam-boly, orinasam-pampihetsika malaza, fahitalavitra famokarana lehibe, orinasam-pirazanana malaza, ary valan-javaboary malaza eran-tany. Ny politikan'ny orinasa NBCUniversal sy ny NBCUniversal dia mandinika ireo mpangataka rehetra nahazoan-dàlana ho an'ny asa tsy misy ifandraisany amin'ny firazanana, ny loko, ny finoana, ny fiavaham-pirenena, ny firaisana (anisan'izany ny fitondrana vohoka), ny taonany, ny fahasembanana, ny sata mifehy ny veterana na ny toetra hafa voaaro amin'ny lalàna. TARATASY KARAMA efa niaina COUNTRY ...
Production Assistant (Fizarana Time)
Comments Off amin'ny Assistant Production (Fizarana Faharoa)
Ny WBFF dia manokatra fisainana mivantana avy hatrany ho an'ny mpanampy mpampianatra Part Time. Ireo adiresy ao amin'ny Kilonga dia ahitana fakantsary fakan-tsary sy teleprompter ho an'ny resadresaka mivantana miaraka amin'ireo adidy hafa asaina. Ity toerana ity dia hahazo ny fampiofanana amin'ny asa, na izany aza, ny fanabeazana sasantsasany amin'ny fahitalavitra dia asiana tolo-kevitra. Fahaizana mivoatra tsara. Ora fahavaratra: 4: 30pm - 11: 30pm (24-28 ora isan-kerinandro). Ireo mpangataka kalitao dia tsy maintsy miasa amin'ny takariva, na alina, na faran'ny herinandro, ary amin'ny fialantsasatra sasany.
Comments Off amin'ny Product Production
Ny Production Production dia hiasa mivantana amin'ny Stage Manager, Production Manager ary mpikambana ao amin'ny ekipa mpamorona, ary mijery sy mandray anjara amin'ny famokarana vokatra feno. Tombontsoa ho an'ireo izay liana amin'ny sehatra rehetra amin'ny famolavolana drafitra, fitantanana sy famonoana ao anatin'ny orinasa mpilalao teatra sy mpilalao sarimihetsika. Ny mpampianatra dia nomena andraikitra manan-danja ary mila miezaka ny ho feno ny famokarana. Ny fahafahana miasa ao amin'ny birao, programa ary / na fehezanteny, ary koa ny sary hosodoko, ny asa an-dakilasy, ny poketra ary ny fanatontosana ny ekipa dia fanampiny, saingy tsy takiana. Faniriana hianatra momba ny lafiny rehetra ...
Comments Off amin'ny Manager Manager Production
Ny fitarihana matanjaka sy ny fahaiza-manaon'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsy maintsy. Fahazoan-dàlana fahazoan-dàlana miaraka amin'ny rakitra madio fitondra-tena ary mahazatra ny fampiasana Excel, Google apps, ary rindrambaiko rindrambaiko. Fitaovana mitondra fiaramanidina lehibe sy kamiao fanampiny. Ny kandidà idealy dia hanana traikefa amin'ny fitantanana ny famokarana. Ny fiantombohan'ny fiantombohan'ny volana Mey dia mifarana amin'ny volana Oktobra. Ny salaires dia mifaninana, ary ny tontolo manodidina ny asa dia mahasadaikatra, mahavariana, ary mihazona tsy fivadihana ara-kanto.
Comments Off amin'ny fianarana Post Production
Ny tetikasam-pividianana famokarana lahatsoratra dia mikatsaka fandalinana amin'ny gazety ho an'ny biraon'ny Chelsea. Ny orinasanay dia miasa miaraka amin'ny mpanjifa tsy miankina sy vahiny mba hamorona milina mpihazakazaka an-tsarimihetsika, amboaran-tononkalo featurettes sy fampandrenesana. Ny mpampianatra dia afaka mahita voalohany ny fomba fiasan'ny orinasam-pandrafetana lahatsoratra isan'andro ary manampy amin'ny famoahana tetikasa voafantina. Izany dia asa tsy ara-dalàna ho an'ny mpianatra na ireo nahazo diplaoma farany izay liana amin'ny asa amin'ny famoahana, horonan-tsary sy horonan-tsarimihetsika. Mitady olona afaka manolo-tena isika mandritra ny iray na roa andro isan-kerinandro ao amin'ny biraonay mandritra ny herinandro ho avy. Fahombiazana amin'ny farany ...
- Fikarohana fikarohana momba ny tantaram-pikarohana, fikarohana momba ny fandraketana database ary ny fanamarinana ny zava-misy - Manamboatra fitaovana famokarana - tapis, sary, sns. Ary mamorona sy manavao ireo logs mba hifanaraka amin'ireo fitaovana ireo. fanitsakitsahana zo amin'ny mpisolovava CNN - fampiasana mozika fampiasana mozika - mandefa b-roll - Manorata amin'ny interviews amin'ny fakantsary. - Manampy amin'ny fanitarana ny fampitam-baovao dizitaly sy media sosialy -no mifandrindra amin'ny vondrona hafa ao amin'ny CNN & Turner (Operations, PR, sns) - Famoahana ny Tranomboky ary ivelan'ny horonantsary / horonantsary avy amin'ny loharanom-pitaovana - Famaranana kilalao vita pirinty - , fifandraisan-davitra, famokarana TV, fanaovan-gazety na fandalinana media na asa.
Page 960 ny 976«First...930940950«958959960961962»970...Last »
Article Archives Select Month Desambra 2019 (149) Novambra 2019 (447) Oktobra 2019 (432) Septambra 2019 (389) Aogositra 2019 (399) Jolay 2019 (286) Jona 2019 (264) May 2019 (273) Aprily 2019 (503) March 2019 (622) Febroary 2019 (325) Janoary 2019 (280) Desambra 2018 (243) Novambra 2018 (406) Oktobra 2018 (496) Septambra 2018 (495) Aogositra 2018 (397) Jolay 2018 (876) Jona 2018 (869) May 2018 (871) Aprily 2018 (831) March 2018 (779) Febroary 2018 (684) Janoary 2018 (605) Desambra 2017 (396) Novambra 2017 (712) Oktobra 2017 (835) Septambra 2017 (608) Aogositra 2017 (583) Jolay 2017 (710) Jona 2017 (543) May 2017 (621) Aprily 2017 (695) March 2017 (704) Febroary 2017 (340) Janoary 2017 (364) Desambra 2016 (606) Novambra 2016 (344) Oktobra 2016 (556) Septambra 2016 (622) Aogositra 2016 (1056) Jolay 2016 (532) Jona 2016 (414) May 2016 (505) Aprily 2016 (713) March 2016 (743) Febroary 2016 (382) Janoary 2016 (123) Desambra 2015 (357) Novambra 2015 (327) Oktobra 2015 (152) Septambra 2015 (259) Aogositra 2015 (440) Jolay 2015 (276) Jona 2015 (140) May 2015 (128) Aprily 2015 (435) March 2015 (289) Febroary 2015 (298) Janoary 2015 (131) Desambra 2014 (103) Novambra 2014 (194) Oktobra 2014 (148) Septambra 2014 (381) Aogositra 2014 (250) Jolay 2014 (287) Jona 2014 (363) May 2014 (231) Aprily 2014 (744) March 2014 (560) Febroary 2014 (427) Janoary 2014 (289) Desambra 2013 (137) Novambra 2013 (545) Oktobra 2013 (290) Jolay 2013 (26) May 2013 (13) Aprily 2013 (1) March 2013 (2) 0 (306)